Hoobiyeyaal ku dhacay guryo Muqdisho ku yaal iyo al-Shabaab oo lagu eedeey - Sabahionline.com
Hoobiyeyaal ku dhacay guryo Muqdisho ku yaal iyo al-Shabaab oo lagu eedeey Abriil 20, 2012
Ugu yaraan hal qof ayaa Khamiistii (19-kii April) ku dhintay 11-na waa ay ku dhaawacmeen markii uu hoobiye ku habsaday xaafad ku taal degmada Wadajir ee Muqdisho, Idaacadda Bar-Kulan ee ay QM maal-geliso ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo al-Shabaab ka qabsaday Afgooye
Bilayska Muqdisho oo su’aalo weydiinaya tuhmanayaal loo haysto in ay dileen askari ka mid ah kuwa dawladda
Gaari bam lagu soo xiray oo 10 qof Muqdisho ku dilay
Guddoomiyaha degmada Wadajir, Axmed Xasan Caddow ayaa weerarka ku eedeeyey al-Shabaab isagoo sheegay in kooxda al-Qaacida la xulufada ahi ay doonayso in ay minja xaabiso wanaagga ummadda Soomaaliyeed. Hoobiyaha ayaa wuxuu ku dhacay dhisme ku yaalla xaafadda Oobbasiibo , halkaa oo ay dadka ku dhaawacmay ku jireen haween iyo carruur. Dhibbanayaashii meesha ku waxyeelloobay ayaa markiiba waxaa loola cararay cisbitaallada meeshaa u dhaw si loo daweeyo. Muxuu kula yahay qoraalkan?
April 20, 2012 @ 11:08:23PM
Anigoo ah muwaadin carbeed oo kalgacayl u haya soomaaliya iyo dadkeeda, waxaan ilaahay waydiisanayaa in uu soomaaliya iyo dadkeeda ka ilaaliyo sharkoo dhan iyo wax kastoo khatar ah oo waxyeelo u gaysan kara. Dadka soomaaliyeed waxay soo mareen wakhtiyo qalafsan, sidaa awgeed, waxaan ilaahay ka baryayaa in uu soomaaliya ka ilaaliyo dadka u taagan in ay hagardaameeyaan ee raba in ay dadka soomaaliyeed waxyeeleeyaan, isla markaana raba in ay waxkastoo qurxoon oo soomaaliya ka jira ay burburshaan. Idanka alle, Soomaaliya waa ay sii dhabar-adaygi doontaa iyadoo sharfoon.
5 lagu xiray Daarusalaam iyagoo wata walxaha qarxa
Shan qof ayaa lagu xiray Daarusalaam Khamiistii iyaga oo haysatay walxaha laga sameeyo qarxyada, ...
Kenyatta oo ku boorriyay sharci-dajiyayaasha in ay dulqaad ka muujiyaan arrinta mushaarka
Madaxwenaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku boorriyay sharci-dajiyayaasha in ay dhinac iska dhigaan ...
Al-Shabaab iyo ciidamada Soomaaliya oo ku dagaallamay Bakool
Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa gobolka Bakool ku dilay sagaal ka tirsan dagaalyahannada al-Sh...
Askari ka tirsan ciidamada madaniga oo lagu dilay waqooyi-bari Kenya
Rag hubeeysan oo aan la garaneeyn ayaa fiidnimadii Sabtida (18-kii Maajo) waxa ay waqooyi-bari ke...
Xisbiga Talada haya ee Kenya oo hoggaamin doona guddiyo baarlamaani oo muhiim ah
Xisbiga talada haya Kenya ee Isbahaysiga Jubilee ayaa hoggaanka u qabtay laba guddi-barlamaan oo ...
Ilaalada xirmooyinka Jabuuti oo tababar laga siiyay caafimaadka xoolaha
Rugta Ganacsiga Jabuuti iyo Hay'adda Cunnada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay ayaa ilaalada xirmo...
Saxafiyiinta Tansaaniya oo lagu boorriyay in ay soo tabiyaan qaddiyadaha xuquuqda aadanaha
Danjiraha Midowga Yurub u fadhiya Tansaaniya Filiberto Ceriani Sebregondi ayaa ku boorriyay saxaf...